Uptodate MM, Author at Uptodate MM - Page3of 141
Zawgyi “သားမှမဟုတ်တာ၊ အမှန်အတိုင်းပဲ သားကပြောတာပေါ့၊ စီအိုင်ဒီကမေးတယ်၊ စခန်းကမေးတယ်၊ သူ့ကို ၃ခါစစ်တယ်၊ ဒီအတိုင်းပဲ ထွက်ဆိုတယ်” လို့ ဗစ်တိုးရီယားအမှုမှာ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အောင်ကျော်မျိုး (ခ) အောင်ကြီးရဲ့ မိဘတွေက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ နေပြည်တော် […]
တစ်နိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေ စိတ်ဝင်စားစွာ စောင့်ကြည့်နေတဲ့ နေပြည်တော် မူကြိုကျောင်းမှ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုရဲ့ စစ်ဆေးချက်က ဒီနေ့မှာတော့ အဖြေထွကိရှိလာပါပြီ။ သုံးနှစ်အရွယ်သမီးလေးကို ရက်ရက်စက်စက် အညွှန့်ချိုးခဲ့သူကတော့ မူကြိုကျောင်းမှ ကျောင်းကားမောင်းတဲ့ ယာဉ်မောင်း အောင်ကျော်မျိုး(ခ) အောင်ကြီး ဆိုသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
“အစိုးရသာ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာ DNA ကို ကျမရဲ့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် စစ်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဂျူးချစ်သင်ဇာ 😱👍”
“အစိုးရသာ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဘန်ကောက်မှာ DNA ကို ကျမရဲ့ ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် စစ်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဂျူးချစ်သင်ဇာ 😱👍” Zawgyi Wisdom Hill ကျောင်းက Victoria ရဲ့ တရားခံကို မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ် အတော်များများကတော့ […]
နာမည်ကြီးနေ တဲ့ အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ)
By Uptodate MMPosted on July 3, 2019
နာမည်ကြီးနေ တဲ့ အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ) အသည်းကွဲလို့ LIVE လွှင့် ငိုယိုပြီး၊ SHAMPOO တွေသောက်ပြတဲ့ ကောင်မလေး၊ နာမည်ကြီးနေ မလေးရှားနိုင်ငံကလို့ ယူဆရတဲ့ […]
နေပြည်တော် ကလေးငယ်ကိစ္စ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး အမြန်လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတဟောင်း၏ ဇနီးတိုက်တွန်း
Wisdom Hill ကျောင်းက ကလေးငယ်ကိစ္စ အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး အမြန်လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတဟောင်း၏ ဇနီးတိုက်တွန်း Zawgyi နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ Wisdom Hill ကျောင်းမှာ အသက် ၃ နှစ်ခန့်အရွယ် ကလေးငယ်တဦး မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့ အမှုကို တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ […]
အမေရိကန် မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရမည့် သာသနာ့ အမွေခံ ပွဲတော်ကြီး ကို ဦးစီးကာ ကျင်းပအောင်ပွဲခံယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ….
By Uptodate MMPosted on July 2, 2019
အမေရိကန် မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရမည့် သာသနာ့ အမွေခံ ပွဲတော်ကြီး ကို ဦးစီးကာ ကျင်းပအောင်ပွဲခံယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ…. အမေရိကန် မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလို့ ပြောလို့ရမည့် သာသနာ့ အမွေခံ ပွဲတော်ကြီး ကို ဦးစီးကာ ကျင်းပအောင်ပွဲခံယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ […]
ပိန်ဆေးကို ဓာတ်မြေသြဇာ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေနဲ့ ထုတ်နေတဲ့ စက်ရုံကိုဖမ်းဆီး ….
By Uptodate MMPosted on July 2, 2019 July 2, 2019
ကြောက်စရာပါ..ထိုင်းမှာ ပိန်ဆေးကို ဓာတ်မြေသြဇာ၊ အစွန်းချွတ်ဆေးတွေနဲ့ ထုတ်နေတဲ့ စက်ရုံကိုဖမ်းဆီး ပိ န်ဆေး၊ အသားဖြူဆေးထုတ်တဲ့စက်ရုံကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲဝင်စီး ၊ ဓါတ်မြေသြစာ၊ အစွန်းချွတ်ဆေးများသုံးပြီးထုတ်နေကြောင်း တွေ့ရှိ ထိုင်းနိုင် ငံမှာ အမျိုးသမီးအလှကုန်တွေကို အတုလုပ်ပြီး လူထုကိုလိမ်ရောင်းနေတဲ့ […]
By Uptodate MMPosted on July 1, 2019 July 1, 2019
သမီးလေး VICTORIA အမှုကို သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်ပြီ နေပြည်တော်ရှိ Wisdom Hill ကျောင်းတွင်တက်ရောက်နေသော ၃ နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် ကျောင်းသူတစ်ဦး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကိုယ်တိုင် စိတ်ဝင်တစားကိုင်တွယ်နေကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးဘုန်းကြွယ်က ပြောသည်။ […]
ရွှေပေါက္ကံ က အသက် ၁ နှစ် ၈ လ သမီးလေး Garce ရဲ့ မျက်ရည်လေးတွေနဲ့ရေးတဲ့စာ….
By Uptodate MMPosted on July 1, 2019
ရွှေပေါက္ကံ က အသက် ၁ နှစ် ၈ လ သမီးလေး Garce ရဲ့ လိင်အကြမ်းဖက်ခံရမှု မျက်ရည်များနဲ့ရေးတဲ့စာ မျက်ရည်များနဲ့ရေးတဲ့စာ ဒီနေ့ ကလေးလေးအိမ် တို့ admin team ကညီအစ်မတတွေ သွားကြတယ်။ […]
“Vera နဲ့ထိုးသတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အလေးချိန် ရောက်နေပြီလို့ ပြောလိုက်တဲ့ မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လ”
By Uptodate MMPosted on June 25, 2019
“Vera နဲ့ထိုးသတ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အလေးချိန် ရောက်နေပြီလို့ ပြောလိုက်တဲ့ အောင်လ” Brandaon Vera ကျွန်တော့ကို စိန်ခေါ်တာ ခုဆိုရင် သုံးလတိတိပြည့်ပါပြီ။ အဲဒီစိန်ခေါ်တဲ့ ညက ကျွန်တော်ဟာ ၂၀၅ ပေါင် ရှိရာက စိန်ခေါ်ချိန်နောက်ပိုင်းကတည်းက ဂျပန်မှာ […]